How do I secureajob in United Nations / NGO sector?
ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်း (UN) အစိုးရမဟုတ်တဲ့ လူမှု အဖွဲ့အစည်း (NGOs) တွေမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုတာ လူတွေကို ကူညီတာ ကြိုက်ရုံ၊ ခရီး သွားရတာ နှစ်သက်ရုံ သက်သက်နဲ့တော့ မလွယ်ကူနိုင်ပါဘူး။ ဒီတစ်ခေါက်မှာ တော့ 'ဝိုင်း' အဖွဲ့သားများမှ UN နဲ့ NGO အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ အလ...
What is networking? (PART II)
Networking ကို ထိရောက် ပြောင်မြောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ "ဝိုင်း" အဖွဲ့သားများမှ အောက်ပါ အကြံပြုချက် (၅) ခု ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) သင့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ကို ချမှတ်ပါ။သင် ဘာသင်ယူချင်တာလဲ၊ ဘာရယူလိုတာလဲ ဆိုတာ ချရေးပါ။...
လူတိုင်းကတော့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှု ကွန်ယက်ဖြန့်ခြင်း (Networking) လုပ်ဖို့ ကြိုက်ချင်မှ ကြိုက်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ တကယ်အရေးပါပြီး လူတိုင်းလဲ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Networking ဆိုတာဘာလဲ။Networking ဆိုတာ လုပ်ငန်းကဏ္ဍတစ်ခု၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို ပိုနား...